कतै तपाईको मिल्ने साथीलाई तपाईसँग प्रेम त बसेन ? जान्नुहोस् यि संकेतहरु | Seto Khabar
कतै तपाईको मिल्ने साथीलाई तपाईसँग प्रेम त बसेन ? जान्नुहोस् यि संकेतहरु
हाम्रा कैयौ साथीहरु हुन्छन, जोसँग हामी आफना सबै कुराहरु शेयर गर्ने गछौ । तर यस्ता धेरै कम साथी हुन्छन जसले हामीहरुलाई बुझ्छन । उनीहरुसँग हाम्रो एउटा अलग लगाब हुन्छ । विस्तारै–विस्तारै यो लगाव कुन बेला प्रेममा परिणत हुने गर्दछ त्यो हामीहरुलाई थाहा नै हुदैन । यस्तैमा तपाईलाई उनीहरुको इमोशन्सलाई यो कारणले पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ ताकि तपाई या त उनीहरुको फिलिंग्स स्विकार गर्नु वा सही समयमा उनीहरुलाई रोकिदिनु । आउनुहोस् जान्नुहोस ती विशेष इशाराको बारेमा
तपाईलाई प्राथमिकता दिनु
सम्बन्ध भित्र पनि प्राथमितका दिनु सबैभन्दा महत्वपुर्ण कडि हो । कस्ले, कस्लाई, कति प्राथमिकता दिइरहेको छ यसैबाट सम्बन्धको महत्व पत्ता लाग्दछ । यस्तैमा यदि तपाई जसलाई चाहनु हुन्छ उसलाई एक आवाजले बोलाउदा यदि उ तपाई सामु दिन वा रात केही नभनि आउछ भने बुझ्नुहोस् संकेत राम्रो छ । यस्तो मानिसहरु तब गर्छन जब उसले तपाईलाई मन पराउछ ।
विशेष भएको महशुुस गराउनु
तपाईलाईं चाहने मान्छेले तपाईलाई स्पेशल महशुस गराउनको लागी केही न केही गरीरहन्छन् । जस्तै, तपाईको जन्मदिनमा केक ल्याउनु, तपाईको यदि मुड खराब छ भने कुनै रमणिय ठाउँमा घुमाउन लानु, तपाईलाई समय–समयमा सरप्राइज दिनु, तपाईको सानो–सानो कुरामा ध्यान दिनु । यदि तपाईले आफनो क्रससँग यो संकेत पाईरहेको छ भने जान्नुहोस् यो फिलिंस साथीत्व होइन प्रेमको ईशारा हो ।
तपाईको लागी पोजेसिव हुनु
यदि तपाईको साथी एकान्तमा तपाईलाई जती पनि खिल्लि उडाए पनि उसले सहन्छ तर यदि त्यहि कुरा कुनै बाहिरि ब्यक्तिले भनेमा मात्र उ रिसाउछ भने यो संकेत उसको पोजेसिव नेचरलाई बयान गर्छ ।
अर्को ब्यक्तिसँग मिल्नबाट रोक्नु
यदि तपाईको साथी तपाई अन्य कोही ब्यक्तिसँग देख्दा ईष्या गर्छ र अन्य ब्यक्तिको नजिक जानबाट रोक्छ भने यो संकेत कहिले पनि साथीको हु्दैन । यो साथी भन्दा पनि माथि हो र तपाई बुझ्नु कि उसले तपाईलाई मन पराउछ ।